Mpanamboatra sy mpamatsy milina famonoana sirrup China Syrup | IVEN
Syrup (ranoka & vovoka)
Ho an'ny syrup maina na famokarana syrup misy rano, tavoahangy 50-500ml.
Fandraisana an-tanana sy fanasana tavoahangy syrup
Araka ny tavoahangy plastika na tavoahangy fitaratra dia manampy amin'ny fanasana rivotra ionic na tobin'ny fanasan-doha ultrasonic izahay, hahazoana antoka ny teknolojia mety indrindra amin'ny fanasana tavoahangy syrup.
Aorian'ny fanasana tavoahangy, mankanesa any amin'ny gara famenoana. Ny vovoka maina dia manamboatra famenoana visy, ary paompy peristaltika ampiasaina amin'ny rano, famenoana avo lenta ary fanaraha-maso matetika, famoahana hafainganam-pandeha tsy voafehy, fanisana mandeha ho azy. Manana fijanonana mandeha ho azy izy io, tsy misy tavoahangy tsy feno.
Miaraka amin'ny fikirakirana kapa
Fanamainana azo atao, toby fijanonana
Taham-pandrenesana avo lenta
IVEN Syrup manasa famenoana milina fametahana caps
1.Fahazarana namboarina avy amin'ny 3000-12000bottles / ora.
2.H automation avo lenta, fizotran'ny fandidiana mety sy fanatsarana ny fampidirana.
3. Mety amin'ny karazana syrup, maina sy ranoka samihafa.
4. Rafitra fiasa mahery vaika & Humanized. Famolavolana olona ho an'ny gara tsirairay, fanaraha-maso PLC + HMI.
5.Tsy misy tavoahangy tsy feno, tsy misy tavoahangy tsy misidina.
6.High famenoana fenitra sy tahan'ny mahafeno fepetra.
Azo ampiharina specs. S 50-500ml
Haingam-pandeha 3000-12000pcs / ora
Fomba famenoana sy fahamarinana Vovoka maina: famenoana visy, ± 2%
Vahaolana ranon-javatra: famenoana paompy peristaltika, ± 2%
Fomba fanakanana Fametahana kofehy
Power 380V / 50HZ, 19KW
Fanaraha-maso haingana Fanaraha-maso matetika
Fibodoana habakabaka Araka ny fahaiza-manao samihafa
Previous: Rafitra fanamoriana mandeha ho azy
Manaraka: Masinina fanangonana syringe